မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု - အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များ အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
TomàsBigordà | | ဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေး, အီကောလောဂျီ
La မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ်မြေယာအရည်အသွေးကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်များမှာများသောအားဖြင့်ကာလရှည်ကြာသစ်ပင်ပန်းမန်များ၊
စိုက်ပျိုးရေးမှတစ်ဆင့်ဂေဟစနစ်သည်မျှတမှုမရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေနှင့်ဆည်မြောင်းရေကိုညစ်ညမ်းစေသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ဤပြproblemနာကိုအမြဲတမ်းဖြေရှင်း။ မရနိုင်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဘယ်အရာကိုအကြောင်းတရားများကိုမြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုရန် ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ
1.2 Flix တွင် Ercros ဖိတ်သည်
3.1 နောက်အနှစ် ၃၀ အကြာချာနိုဘိုင်း
မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု၏အကြောင်းရင်းများကွဲပြားကြသည်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် မြေအောက်ရေညစ်ညမ်းတက်အဆုံးသတ်သောမြေအောက်အောက်မှာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပစ္စည်းများ အရာထို့နောက်ရေသွင်း, သောက်သို့မဟုတ်အစားအစာကွင်းဆက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆိပ်တက်အဆုံးသတ်ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကိုမတော်တဆညစ်ညမ်းစေနိုင်သောစီမံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာဤကြိုးပမ်းမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာအားနောင်လာမည့်အရာနှင့်မစဉ်းစားဘဲအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်မျိုးဆက်များစွာကြာလိမ့်မည်။ ။
ညစ်ညမ်းareaရိယာနှင့်အဆက်အသွယ်အမြဲတိုက်ရိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့သင်္ဂြိုဟ်သည့်အခါဖြစ်ပျက်သည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပစ္စည်းများ မြေအောက်နှင့်ဤရွေ့ကားထို့နောက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆည်မြောင်း, သောက်သို့မဟုတ်အဆိပ်တက်အဆုံးသတ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့မြေအောက်ရေညစ်ညမ်းမှုကိုအဆုံးသတ် အစာကွင်းဆက်ငါး၊ ကြက်သို့မဟုတ်အခြားညစ်ညမ်းသောတိရိစ္ဆာန်များကိုစားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
အမှိုက်များကိုသိုလှောင်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်မတော်တဆစွန့်ပစ်ခြင်း (ဥပမာ Flix ရှိ Ercros ကုမ္ပဏီကဲ့သို့)၊ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအမှိုက်သရိုက် သို့မဟုတ်အတူတူပင် (စပိန်နိုင်ငံမှမြေဖို့မြေများစွာ) ၏သင်္ချိုင်းအဖြစ်ပြိုကွဲမှုကြောင့်တင့်ကားများသို့မဟုတ်သိုက်များယိုစိမ့်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံညံ့ဖျင်းခြင်းသည်၎င်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းအချို့ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ အချိန်မှစ၍ ဤတွင်မနေပါ ထိုစာရင်းသည်ရေဒီယိုသတ္တိကြွယိုစိမ့်မှုကဲ့သို့သော“ အသေးစား” ပြwithနာများဖြင့်ကြီးထွားလာသည်ပိုးသတ်ဆေးများ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကိုမသိဘဲယနေ့အသုံးပြုသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကိုအထူးတလည်အသုံးပြုခြင်း။
စပိန်နိုင်ငံသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်းအတွက်အနည်းငယ်သာအာရုံစိုက်မှုသည်ယနေ့ဥရောပယူနီယံမတိုင်မီအရှက်တကွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သန်းကြွယ်သူဌေးဒဏ်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခု လာမည့်နှစ်များတွင်။ ဘရပ်ဆဲလ်တွင်အလွန်ရည်မှန်းချက်ကြီးသောပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအစီအစဉ်များရှိသည်။ ၂၀၂၀ တွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသည်၎င်းတို့၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ ၅၀% ကိုပြန်လည်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၃၀ တွင်ကော်မရှင်က ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ရောက်ရှိရန်အတည်ပြုလိုက်သည်။ သို့သော်စပိန်နိုင်ငံသည်ယနေ့ပြန်လည်အသုံးပြုရန်ခဲယဉ်းသည်။ သင်၏စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၏ ၃၃% နှင့်တိုးတက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သုံးနှစ်အတွင်းတိုင်းပြည်၏တာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အရှိဆုံးသူပင်မဟုတ်ပါ။
စပိန်၏တည်ရှိမှုနှင့်အကြွင်းမဲ့စွန့်ခွာမှုအတွက်ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ဥရောပသမဂ္ဂတရားရုံးချုပ် (CJEU) မှနှစ်ကြိမ်စီရင်ချက်အနေဖြင့်နိုးထမှုကိုပထမဆုံးအနေဖြင့်ခေါ်ယူပြီးဖြစ်သည်။ 88 ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောအမှိုက်ပုံ။ ပထမအကြိမ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် ၂၆ ခုသည်တက်ကြွနေဆဲသို့မဟုတ်ပိတ်သိမ်းရန်ကျန်နေသေးသည့်မြေဖို့မြေ ၂၇ ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမှရောက်ရှိလာပြီးအခြားမြေဖို့မြေ ၆၁ နေရာတွင်လက်ချောင်းများကိုတင်ထားသည်။ ၈၀ ရာနှုန်းကိုဖြန့်ဝေထားသည် ကနေရီကျွန်းစုများနှင့် Castilla y Leónအကြား.
ကျွမ်းကျင်သူများစွာ၏အဆိုအရအမှိုက်ပုံများသည်အချိန်ကုန်နေသောဗုံးဖြစ်သည်။ ပြီးတာနဲ့ပိတ်, သူတို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည် ၁၄ နှစ်အတွက် မြေအောက်ရေနှင့်လေထုထုတ်လွှတ်မှုများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အပေါက်ဖောက်ခြင်းအားဖြင့်ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်များကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါ။
များသောအားဖြင့်တရားဝင်ပတ် ၀ န်းကျင်များအားသုံးမီလီမီတာအလွှာသုံးခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအကောင်းဆုံးကိစ္စများတွင်ရွှံ့စေးနှင့်ကာရံထားသော်လည်း၎င်းတို့ကိုဓာတ်ငွေ့နှင့်မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့်ထိုးဖောက်လေ့ရှိသည်။ «၎င်းတို့သည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနများမှလူအများအပြားတွင်အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသာပါ ၀ င်သည်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ သူတို့ကင်ဆာဖြစ်ကြသည်»
Flix တွင် Ercros ဖိတ်သည်
ကာရာတလန်ပြည်နယ် Tarragona ရှိ Flix ရေလှောင်ကန်သည် Ercros ကုမ္ပဏီ၏ဓာတုဗေဒစက်ရုံမှရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်လွန်ပြီးဖိတ်ခြင်းနှင့်မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းခြင်းများကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်းမှုမှ ဦး ဆောင်လျက်ရှိသည် ယေဘူယျမြစ် Ebro, ကြောင်းအချက်အနေဖြင့်ပါးစပ်။
ညစ်ညမ်းပါဝင်သည် မိုးသည်းထန်စွာသတ္တု ထိုကဲ့သို့သောမာကျူရီနှင့်ကဒ်မီနီယမ်, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls (PCBs) သို့မဟုတ် DDT နှင့်၎င်းတို့၏ metabolites အဖြစ်အဆိပ်နှင့်မြဲ organochlorine ဒြပ်ပေါင်းများအဖြစ်။
“ အီဘရိုမြစ်မှာအဆိုးရွားဆုံးညစ်ညမ်းစေတဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မြစ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်ငွေမပေးနိုင်တာနှစ်ပေါင်းများစွာရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးအဓိကအားဖြင့်သောက်သုံးရေရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ Ercros စက်ရုံသည် Flix မြို့အနီးတွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ယခင် Erkimia, ထုတ်လုပ်သောနှင့်ရောင်းချသော Ercros SA ၏ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ထိခိုက်သည့်ရေလှောင်ကန်အား၎င်း၏အမည်ကိုပေးသည် ဓာတုနှင့်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အခြေခံထုတ်ကုန်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, စာရင်းအများကြီးနီးပါးအဆုံးမဲ့နီးပါးဖြစ်ပါသည်။ အခြားသောတူညီသောအရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းများဖြစ်သောသတ္တုတူးဖော်ရေး (မာကျူရီ၊ ကဒ်မီယမ်၊ ကြေးနီ၊ အာဆင်းနစ်၊ ခဲ) ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွယိုစိမ့်မှု၊လောင်ကျွမ်းသောအင်ဂျင်များမှညစ်ညမ်းမှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းမှအငွေ့များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများ (ကျောက်မီးသွေး, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့)), အခြားသူများအကြားဆင်းရဲသောသူတို့သည်အခြေအနေဟောင်းရေပိုက်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ရပြီးအကြိမ်များစွာဖြစ်ပေါ်စေသည် သူတို့ရှာရန်ခက်ခဲသည်, ညစ်ညမ်းအပင်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များသို့ရောက်ရှိသို့မဟုတ်ရေနည်းလမ်းများစွာအတွက်ညစ်ညမ်းနိုင်ပေမယ့်အစဉ်မပြတ်ကတည်းက သူတို့ကအသေးအဖွဲဖြစ်ကြသည်။
ကြမ်းတမ်းသောအဖြစ်မှန်၌တည်၏ ဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းတရားများရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေရန်ကြိုးစားရာတွင်မသက်မသာဖြစ်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၌ယိုစိမ့်မှု ၂၀ ရှိခဲ့သကဲ့သို့၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်၊ မည်ကဲ့သို့ဖယ်ရှားပစ်ရမည်၊ ဒီမှာပြhouseနာကငါတို့အိမ်မဟုတ်၊ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ဂြိုလ်ပဲ
ကြီးစွာသောပြproblemsနာများ၏နောက်ထပ် ဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းတရားများရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေရန်ကြိုးစားရာတွင်မသက်မသာဖြစ်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပေါက်ကြားမှု ၂၀ ရှိခဲ့သကဲ့သို့၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို၎င်း၊ ၎င်းတို့ကိုမည်ကဲ့သို့ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတို့ကိုမမြင်နိုင်ပါ။ ဤနေရာတွင်ပြhomeနာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပင်ဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်ရှိသောထုတ်ကုန်များသန့်ရှင်းသောဆေးများ၊ ဆေးသုတ်ဆေးများ၊ ဘက်ထရီများသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည်ရေနှင့်မြေဆီလွှာကိုညစ်ညမ်းစေခြင်းဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေနိုင်သည့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောအမှိုက်ပုံများတွင်အဆုံးသတ်ခြင်းမရှိသောတိကျသောစုဆောင်းမှုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုလိုအပ်သည်။
stacks တစ်ခုဖြစ်သည် အန္တရာယ်အများဆုံးအဆိပ်ထုတ်ကုန် ၎င်း၏မာကျူရီနှင့်ကဒ်မီယမ်အကြောင်းအရာသည်။ ဘက်ထရီများကုန်သွားပြီးစုဆောင်းသည်သို့မဟုတ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးသောအခါမာကျူရီကိုထွက်ပြေးရန်ခွင့်ပြုပြီးမကြာမီရေထဲသို့ပြန်သွားသည်။ မာကျူရီသည်ကုန်းနှင့်ရေညှိများမှ၎င်းမှငါးအထိ၊ ၎င်းမှလူသို့စုပ်ယူသည်။ ဆဲလ်တစ်လုံးသည်လီတာ ၆၀၀,၀၀၀ ကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။ ရေ။ ဆေးဝါးများတွင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများရှိပြီးအမှိုက်သရိုက်များကိုလည်းညစ်ညမ်းစေပြီးရေထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
ပြည်တွင်းနေအိမ်များနှင့် / သို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းများမှအမှိုက်သရိုက်များ။
စီးပွားဖြစ်ရုံးများ၊ ဈေးဆိုင်များစသည်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအော်ဂဲနစ်ဆန်သောသစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ကတ်ထူပြား၊ စက္ကူများစသည်တို့မှဖြစ်သည်။
မြို့ပြစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပန်းခြံနှင့်ဥယျာဉ်မှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အသုံးမကျသောမြို့ပြပရိဘောဂများစသည့်လူ ဦး ရေနှင့်ကိုက်ညီသည်။
အာကာသအမှိုက်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပတ်လမ်းတွင်ရှိစဉ်၊ သူတို့၏အသုံး ၀ င်သောဘဝကုန်လွန်သွားပြီဖြစ်သောလူ့မူလအစ၏ဂြိုဟ်တုများနှင့်အခြားအပိုပစ္စည်းများ။
La မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု အကျိုးဆက်များနှင့်လူတို့၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်သတ္တဝါများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးသည်မြေဆီလွှာ၏ကျန်းမာရေးကိုယုတ်ညံ့စေသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုစီအပေါ်များစွာမှီခိုသည်။
ပထမဆုံး အကျိုးဆက် အပင်များသည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်း၊ ဆက်လက်ရှင်သန်နေသောသူများသည်အားနည်းသောရှုထောင့်များကိုတင်ပြခြင်းနှင့်သူတို့၏သဘာဝဖြစ်စဉ်များသည်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းခြင်းသည်ဘဝ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည် မန်များအစားအစာသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းသောရေမပါဘဲမျိုးစိတ်များသည်မျိုးပွားခြင်းကွင်းဆက်တွင်ရွေ့လျားသွားခြင်းသို့မဟုတ်အစားထိုး။ မရသောပျက်စီးခြင်းများကိုခံစားကြရသည်။ ဒီဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ "ရှုခင်းပျက်စီးခြင်း" ဟုခေါ်နှင့်ထို့ကြောင့်တစ် ဦး "ဟုခေါ်သည်အဘယျသို့မြေတန်ဖိုးဆုံးရှုံးမှု” စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားတယ်၊ သတ္တဝါတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်။
မြေယာအရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုသည်၎င်းမှ၎င်း၏ဆိုးကျိုးများဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည် တန်ဖိုးကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကျန်းမာသောဂေဟစနစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်၊ မွေးမြူရန်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားရန်အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အကျိုးဆက်များကိုတစ် ဦး ဖြစ်ပေါ်စေတိတ်တဆိတ်ခံစားခဲ့ရနိုင်ပါတယ် သားကောင်များ၏စဉ်ဆက်မပြတ် trickleလူသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်မျိုးစိတ်များ။
ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုမှာချာနိုဘိုင်းနျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံ၊ ဂျပန်စွမ်းအင်စက်ရုံမှရေဒီယိုသတ္တိကြွယိုစိမ့်မှု de ဖူကူရှီးမားအကြောင်းမှာမြေကြီးညစ်ညမ်းမှုသည်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေသည်။ အဲဒါတောင်မှတွေ့ပြီ ကမ်းရိုးတန်းမှရေဒီယိုသတ္တိကြွအပျက်အစီးများ တိုကျိုတက္ကသိုလ်စက်မှုသိပ္ပံ၊ ကာနဇာဝါတက္ကသိုလ်နှင့်အမျိုးသားသုတေသနအင်စတီကျုတို့၏လေ့လာမှုအရဖူကူရှီးမားမှအထူးသဖြင့်အဆိုပါတူညီသောယိုဖိတ်မှုများမှမြေကြီးအောက်ခြေတွင်ရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ဂေဟစနစ်၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့်ရှုခင်း၏ယုတ္တိယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့်အတူမကြာခဏမပြောင်းလဲနိုင်သောဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုကဆိုလိုသည် သန်းကြွယ်သူဌေးရှုံး ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ (သို့) စက်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းကိုတားဆီးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
နောက်အနှစ် ၃၀ အကြာချာနိုဘိုင်း
ချာနိုဘိုင်းနျူကလီးယားမတော်တဆမှုအပြီးအနှစ် ၃၀ အတွင်းမှာကွန်မြူနစ်ဝါဒပြိုလဲသွားပြီးဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲသွားခဲ့ပြီးတောင်မှအဲဒီမှာတောင်ရှိနေခဲ့တယ် တော်လှန်ရေးနှစ်ခု နှင့်ယူကရိန်း၌နေဆဲငုပ်လျှိုးနေနှင့်မပြီးဆုံးသေးသောစစ်။
သမိုင်းကြောင်းအရပြောရလျှင်ထိုဝမ်းနည်းဖွယ်နံနက်ခင်းမှ စတင်၍ ကမ္ဘာကြီးသည်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲလာသည်။ ထိုအချိန်တွင်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနံပါတ် (၄) တွင်ဓာတ်ပေါင်းဖိုပညာရှင်အုပ်စုတစ်စုမှပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗလာဒီမာလီနင်သူတို့သည်သူတို့၏လုံခြုံရေးကိုအားဖြည့်ရန်ရည်ရွယ်သည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နေသော်လည်း၊
သို့သော်ပတ်ဝန်းကျင်၊ လေ၊ ရေ၊ မြေနှင့်နေထိုင်ပြီးနေထိုင်ကြမည့်အရာအားလုံးအတွက်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက် - နာရီ၏လက်များသည်စာသားအတိုင်းရွေ့မရွေ့သွားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ The ရေဒီယိုသတ္တိကြွသောမြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုသည်နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ ကြာပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံးနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်လျှင်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာသည်။
သစ်တောအသီးများနှင့်မှိုများ၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အသားနှင့်ငါးများတွင်ဂျုံ၌ရှိနေသေးသည်။ ပြီးတော့မီးလုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ထင်းနဲ့နောက်မှာကျန်နေတဲ့ပြာတွေပါ။ တနည်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်။ တာ ၀ န်ရှိသည့်အရာသည်ယနေ့ပင်လျှင်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရန်ဖြစ်သည် Geiger ကောင်တာသင့်ရဲ့စားပွဲပေါ်မှာယူသွားမည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးအတိုင်းအတာရှိမရှိသိရန်၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွလာသောအခါဆူညံသံကိုဖြစ်စေသောစက်ယန္တရားများ။ မျိုချခံရဖို့။
ကာကွယ်တားဆီးရေးသည် အားလုံး၏အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကူညီပံ့ပိုးရန်အငယ်ဆုံးကိုသင်ပေးပါ. အမှိုက်ပုံးကို၎င်းတို့နေရာမှစွန့်ပစ်ခြင်းမှသည်ရပ်ရွာရှိသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောမောင်းနှင်စက်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းအထိဖြစ်သည်။
သို့သော်သင်သည်မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုကိုအမြဲရှောင်ရှားရန် (မလိုချင်) အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားပြီးထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြtheနာ၏အရင်းအမြစ်ကိုတိုက်ရိုက်သွားလျှင်၊ ထုတ်လုပ်မှုမော်ဒယ်အတွက်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ သတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ဆီကိုအခြေခံသည့်ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုခြင်းကိုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံအချို့၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အချို့သောအလေ့အကျင့်များကိုတားမြစ်ခြင်း။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤရွေးချယ်စရာများသည်အိပ်မက်မျှသာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် fait accompli ၏ရှေ့မှောက်၌areaရိယာကိုသန့်ရှင်းရေးမှသည်ပျက်စီးသွားသောofရိယာ၏ရိုးရှင်းသောနယ်နိမိတ်နှင့်အဆုံးအထိဖြေရှင်းချက်များကိုရှာဖွေသည်။ အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုတားမြစ်သည်။ ဖူကူရှီးမားသို့မဟုတ်ချာနိုဘိုင်းကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များတွင်ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများသည်လူ့ဘ ၀ အတွက်မသင့်တော်ပါ။
စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကြောင့်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းညစ်ညမ်းမှုများများပြားလာသည်နှင့်အမျှဖြေရှင်းချက်များသည်ထိုအရင်းအမြစ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုမှအတိအကျလာသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, လုပ်ရပ်များပြန်လည်အသုံးပြုစက်ရုံများတိုးတက်အောင်အာရုံစိုက်နေကြသည် မြေဆီလွှာနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရေ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်စေသောကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်။
မြေဆီလွှာ bioremediation သည်သက်ရှိသတ္တဝါများဖြစ်သောဘက်တီးရီးယား၊ အပင်များ၊ မှိုများကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းသည့်ဂေဟစနစ်များအားပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ရှာဖွေသည့်နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ။ ၎င်းကိုကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုကြောင့်ညစ်ညမ်းသောမြေဆီလွှာများ၊
အလေ့အကျင့်ကောင်းများအနေဖြင့်အမှိုက်သရိုက်များနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလုံလောက်စွာပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုစက်မှုနှင့်အိမ်သုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကုသခြင်းသို့မဟုတ်ဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေးကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်မြေဆီလွှာများညစ်ညမ်းမှုမှကင်းဝေးစေနိုင်သည်။ မိလ္လာကွန်ယက်များကိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ထိန်းသိမ်းထားပြီးရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းနှင့်သဘာဝသို့ပြန်သွားသည့်စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကုသခြင်းတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
လူများသည်အဆင်ပြေစေရန်ကားများကိုသာသုံးကြပြီးမြို့ကြီးများရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မည်မျှခက်ခဲသည်ကိုလည်းအသုံးပြုကြသည်။ အကယ်၍ အစိုးရများသည်ပိုမိုထိရောက်သောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကလူများသည်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်တွန့်ဆုတ်ကြလိမ့်မည်
မြို့ပြများတွင်လျှပ်စစ်ကားများပိုမိုများပြားလာပြီး၎င်းတို့အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်သာအသုံးပြုသောကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ထုတ်လွှတ်သောမည်သည့်အမျိုးအစားကိုမျှမထုတ်လုပ်ပါ။ နေစဉ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိတယ်ယနေ့လျှပ်စစ်ကားဘက်ထရီများသည်ကြာရှည်ခံပြီးမြို့အနှံ့အပြားရှိအားသွင်းဘူတာများကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။
သင်ယခုယူနိုင်သည့်အတိုင်းအတာတစ်ခု။ သင်၏ကားလည်ပတ်နေစဉ်တွင်ရပ်တန့်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအချိန်များ၌ယာဉ်သည်လောင်စာဆီအမြောက်အများကို၎င်း၏ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုသည်
တစ် ဦး ကချွတ်ယွင်းကားကိုလေ့ရှိတယ် ပိုပြီးညစ်ညမ်း။ သင်သည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုလုပ်ဆောင်ပါကလည်ပတ်မှုပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်သာမကသင်သည်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်းလျှော့ချရန်သေချာသည်။
မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန်သစ်တောပြုန်းတီးမှုများကိုအလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်ရမည်။ သစ်ပင်များကိုစိုက်ပျိုး။ မြေဆီလွှာတိုက်စားမှုကြောင့်သစ်နှင့်မြေဆီလွှာအပေါ်ယံအလွှာကိုရေနှင့်လေကဲ့သို့သောသဘာ ၀ အားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သစ်ပင်များမရှိသည့်အခါတွင်ဖြစ်ပွားသည်။
အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များသည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဈေးကြီးသည်ဟုသံသယမရှိပါ။ သို့သော်အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များရွေးချယ်ခြင်းကက အော်ဂဲနစ်ထုတ်လုပ်မှုပိုမိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုမြေကြီးညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အထည်အိတ်များကိုသုံးပါ။ ပလပ်စတစ်အိတ်များကိုမစားပါနှင့်။ ကံကောင်းတာကသူတို့ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်ကတည်းကသူတို့ရဲ့အကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားသည်။
အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း: တစ်ချိန်ကသက်ရှိသို့မဟုတ်သက်ရှိသတ္တဝါ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုံးဥပမာ - အိမ်တွင်အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းမှအရွက်များ၊ အကိုင်းအခက်များ၊
အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောအကျန်များ မည်သည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမဆိုဇီဝမဟုတ်သည့်မူလစက်မှုလုပ်ငန်းများမှဖြစ်စေ၊ အခြားသဘာဝမဟုတ်သည့်ဖြစ်စဉ်များဖြစ်သောပလပ်စတစ်၊ ဒြပ်ထည်စသည်ဖြင့်ဖြစ်စေ။
အန္တရာယ်ရှိသောအကြွင်းအကျန်များ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဇစ်မြစ်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအထူးနည်းလမ်းဖြင့်ကုသရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ - ကူးစက်တတ်သောဆေးပစ္စည်းများ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အက်ဆစ်များနှင့်တဖြည်းဖြည်းစားသောဓာတုပစ္စည်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » အီကောလောဂျီ » ဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေး » မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု၏အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များ
Dalila Rolón del Puerto ဟုသူကပြောသည်
အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောပညာရေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအလုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပညာရေးစင်တာများအားအသိပေးရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုကူညီဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာတွေ့ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်
Dalila Rolón del Puerto အားစာပြန်ပါ
emily_pro ပါ ဟုသူကပြောသည်
နောင်အနာဂတ်မှာဖူကူရှီးမားနျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုမလိုက်နာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုမှာရေနံယိုဖိတ်မှုကြောင့်ပင်လယ်ရေညစ်ညမ်းမှုများဖြစ်သည်။ လူတို့အကြားအသိအမြင်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဆောင်းပါးကောင်း။
ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ! : =)
ပိုနည်းသော cony ဟုသူကပြောသည်
More နည်းနည်း cony ကိုပြန်ကြားပါ
ငါ ၁၀၀၀ ပေးပါ
rosysela saldaña villacorta ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
rosysela saldaña villacorta အားပြန်ကြားပါ
ဟယ်လို။ အလွန်ကောင်းသောရှင်းပြချက် ...
အလွန်ကြီးမားသောဆောင်းပါးတွင်သူတို့သင်ကြားခြင်းကပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်များ၊ မြို့ကြီးများ၊ မြစ်များနှင့်ပင်လယ်များကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
Green Wheel အားပြန်ကြားပါ